PressReader - Kwayedza: 2017-06-30 - Kunzwisisa pamusoro pegonorrhea
Kwayedza - 2017-06-30 - Denhe Reruzivo -
ZVICHITEVERA chinyorwa chaive pamusoro pechirwere cheSyphilis chakaburitswa mubepanhau rino svondo rapera, sangano reNational AIDS Council (NAC) riri kutambira mibvunzo yakawanda pamusoro pezvimwe zvirwere zvepabonde.
Kuita bonde risina dziviriro kunoisa munhu panjodzi yekutapurirwa zvirwere zvepabonde, kusanganisira utachiona hweHIV. Gonorrhea inotapuriranwa sei? Chirwere ichi chinotapuriranwa kuburikidza nekuita bonde nekunhengo yemunhukadzi yesikarudzi, nekunzvimbo inobuda netsvina kana kuti bonde remukanwa nemunhu anenge aine utachiona hwegonorrhea. Mudzimai anenge akazvitakura aine gonorrhea, anokwanisa kutapurira mwana wake pakusununguka. Zviratidzo zvegonorrhea:
Utachiona hwemumatumbu (rectum) kuvanhurume nevanhukadzi hunogona kuve nezviratidzo zvinotevera: kuburitsa zvinoerera kurwadziwa nepanzvimbo panobuda netsvina kubuda ropa kurwadziwa kwakanyanya panguva yekuita tsvina
Gonorrhea inorapika here? Hongu, gonorrhea inorapika nemushonga wakagadzirirwa kurapisa chirwere ichi. Zvakakosha kuti utore mushonga wose waunenge waudzwa nachiremba kuti utore. Mushonga wekurapisa gonorrhea haukumbidzanwe.
· Kuva murudo rwenguva yakareba nemudikani mumwe chete akaongororwa ndokuonekwa kuti haana zvirwere zvepabonde.
· Kushandisa makondomu nemazvo uye nguva dzose panguva yebonde.
Kana uchinge uine pamuviri, zvakakosha kuti utaure neveutano kuitira kuti uongororwe pamwe nekupihwa mishonga yakakodzera, kana zvichikwanisika.